छाला हेरचाह दिनचर्या किन महत्वपूर्ण छ? के समावेश गर्नुपर्छ? :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
छाला हेरचाह दिनचर्या किन महत्वपूर्ण छ? के समावेश गर्नुपर्छ?
स्वास्थ्यखबर शुक्रबार, फागुन २०, २०७८, १९:५१:००
छालाको हेरचाह सबैका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनकि यसले बाहिरबाट आन्तरिक स्वास्थ्य प्रतिबिम्बित गर्दछ। नियमित हेरचाहले हाम्रो छालालाई स्वस्थ, चम्किलो र सुन्दर बनाउनुका साथै छालालाई समग्रमा राम्रो अवस्थामा राख्छ। हामीले दिनहुँ छालाका कोशिकाहरू फ्याँक्ने भएकाले छालालाई चम्किलो र स्वस्थ राख्न महत्त्वपूर्ण छ। छाला हेरचाहको दिनचर्याले त्यो काम गर्नेछ।
छाला हेरचाह दिनचर्या किन महत्त्वपूर्ण छ?
तपाईंले छाला हेरचाह दिनचर्यामा के समावेश गर्नुपर्छ?
तपाईंको यस हेरचाहको प्रक्रियामा तपाईंको साझेदार Truederma ले तपाईंलाई सबै प्रोडक्ट्सहरु अत्यन्तै रिसर्च गरेर तयार परेको छ। नियमित रुपमा प्रयोग हुने प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री र लाभदायक हुनुपर्दछ। Truederma को सबै प्रोडक्ट्स छाला रोग विशेषग्यहरु बाट प्रयास र परीक्षण पछि बजारमा ल्याउने गरिन्छ। Truederma एउटा अमेरिकन ब्रान्ड हो जसले अमेरिक, भारत, नेपाल लगायत अन्य देशमा पनि आफ्नो प्रोडक्ट्सको बजारीकरण गरेको छ।